Dagaalkii Sakay Kadhacay Magaalda Caabud Waaq Iyo Xaaladii Ugu Danbeesay – STAR FM SOMALIA
Maamulada Ahlu Sunna & Galmudug, ayaa midba midka kale waxa uu ku eedeeyay inuu soo qaaday dagaalkii maanta ka dhacay Magaalada Caabudwaaq Ee Gobolka Galgaduud.
Wasiirka Ganacsiga & Warshadaha Maamulka Galmudug, C/ladiif C/laahi Warsame (Gacamey), ayaa Ciidanka Al Sufa Ee Ahlu Sunna ku eedeeyay inay saakay hoygiisa soo weeraren, xilli sida uu sheegay uu xalay uun soo galay Magaalada.
Wasiirka oo galabta la hadlay Laanta afka Somaliga ee VOA, ayaa sheegay inay iska caabiyen Xoogag Al Sufa, isla-markaana ay ka saareen inta badan Magaalada Caabudwaaq, sida uu yiri.
Wasiirka waxa kaloo uu sheegay dagaalka in lagu dilay laba ka mid ah Xoogaga Ahlu Sunna, halka dhankooda sida uu sheegay aanu wax khasaaro ihi ka soo gaarin dagaalkaasi.
Madaxweyne Ku Xigeenka Maamulka Ahlu Sunna, Xasan Maxamuud Warsame oo sidoo kale la hadlay VOA, ayaa Maamulka Galmudug ku eedeeyay inay iyagu soo weeraren Saldhiga Booliska Caabudwaaq, xilli uu sheegay inay ku sugan yihiin Ciidanka Ahlu Sunna.
Madaxweyne Ku Xigeenka, ayaa beeniyay in laba askari looga dilay dagaalkii maanta, isagoo intaa ku daray inaanay garanayn wax khasaaro ah oo dagaalka ka dhashay. Sidoo kale waxa uu sheegay inay iyagu uun ku sugan yihiin Magaalada.
Xasan Maxamuud Warsame, ayaa diiday inay aqoonsan yihiin Maamulka Galmudug, wuxuuna ku tilmaamay mid loo soo diray in uu carqaladeeyo nabadda, ay maanta haystaan shacabka reer Galgaduud, sida uu yiri.
Dhanka kale dagaalkii maanta, ayaa waxaa la xaqiijiyay inay ku dhaawacmeen illaa toddobo qof oo rayid u badan, sidoo kalana uu ku dhintay wiil yar oo arday ahaa, kaasoo rasaasta kula kulmay wadada, xilli uu ku sii jeeday iskuulkii uu wax ka baranaayay.
Suxufiyiinta degan Magaalada Caabudwaaq, ayaa soo sheegaya in shacabku ay qaarkood ka barakacayn guryahooda, iyagoo ka baqdin qaba inay ku dul dagaalamaan dhinacyadaasi.
Bartamaha Caabudwaaq, ayaa waxaa lagu arkayaa laba ciidan oo iska soo horjeeda, waxa kaloo Magaalada laga dareemayaa dhaq dhaqaaqyo ciidan oo garabyadaasi ay ka wadaan.